ဗီဒီယို | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ROHINGYA REFUGEES REAL LIFE EXPERIENCES Part 1
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 4:27 AM No comments:
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 8:31 PM No comments:
Burmese invasion of Arakan and the rise of non Bengali settlements in Bangladesh Origin of the Tribes of Chittaging Hill Tract (CHT) By Abid Bahar, Canada Introduction: Arakan wasamedieval kingdom located at the edge of South Asia becameaprovince of Burma after the Burmese invasion in 1784 and the subsequent annexation of it with Burma. To the people of India and Bangladesh, Arakan became sadly memorable for the tragic massacre of the Moghul prince Shah Suja and his entire family by the Arakanese king Sandathudamma. It is important to note that Shah Suja before taking shelter in Arakan was the Moghul Govornor of Bengal (1639-60) and was being chased by the Moghal General Mir Jumbla.
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 8:26 PM No comments:
Rohingya-What I learned from Aung San Suu Kyi
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 3:43 PM No comments:
ROHINGYA in Arakan, Burma. Amnesty’s Rights Generation Aung San Suu Kyi Ins
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 3:35 PM No comments:
Posted by burmanativemuslim.blogspot.com at 3:33 PM No comments:
This entry was posted on February 8, 2013, in ဗီဒီယို, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
The BBC’s Jonah Fisher on the video, shot by aid group Free Burma Rangers
Military aircraft have been targeting rebel areas in Burma’s northern Kachin state over the last five days, video obtained by the BBC shows.
Asked to comment on the video, the director of the president’s office, Zaw Htay, said the situation was complex, and that the military had told them they were only using planes to re-supply its troops.
“The aircraft being used are K8 training aircraft not fighter jets – that is the information I got from the military,” he said.
“I have no information on the use of helicopters. There isavery difficult situation in Kachin state.”
The witness accounts, along with the video footage, suggest that the army is going beyond Thein Sein’s public instructions to only fight in self-defence, says the BBC’s Jonah Fisher in Bangkok.
The group describes itself as “a multi-ethnic humanitarian service movement”, according to its website. The group works to provide aid in Burma’s troubled border regions.
This entry was posted on January 2, 2013, in ဗီဒီယို, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
Posted by danyawadi on December 27, 2012 in News, Videos
This entry was posted on December 27, 2012, in ဗီဒီယို, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
Rophingya Genocide : နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရိုဟင်ဂျာများလူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း Video News
روهنجيا المسلمين في ساحل البحر بدون أكل والشرب في أركان
Back to Album Previous · Next
Bin Noor, Ahmad Saeed and2others like this.
Hussain Arakani thanks
Title:روهنجيا المسلمين في ساحل البحر بدون أكل والشرب في أركان
This entry was posted on December 26, 2012, in ဗီဒီယို, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
video: UNHCR မှတင်ဆက်တဲ့ ရခိုင်မှမွတ်စလင်မ်ဒုက္ခသည်များအခြေအနေမှတ်တမ်းတို.
Javed Ansari and 8 other friends shared M-Media‘s
UNHCR မှတင်ဆက်တဲ့ ရခိုင်မှမွတ်စလင်မ်ဒုက္ခသည်များအခြေအနေမှတ်တမ်းတို
ဒုတိယအကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ် အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးလာရသော မွတ်စလင်များရဲ့ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်ပြောစကားများ၊
လက်ရှိနေထိုင်ရာ ဆင်တမှော် ပေါက်တော ဒုက္ခသည်စခန်းများရဲ့ အခြေအနေ
UNHCR မှ ရိုက်ကူးထားတဲ့ မှတ်တမ်းတို
Javed Ansari shared M-Media‘s
This entry was posted on December 21, 2012, in ဗီဒီယို, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on December 5, 2012, in ဗီဒီယို, အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပ(ရုပ်/သံ) …
ပေးထားသော၊တွေ့ရသော လင့်များကို နှိပ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
myanamarmuslimnet uploadedavideo6hours ago
The Real Intruders form Bangladesh 2
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မှခိုးဝင်လာသူ များ မှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မပာုတ်သူများပ­ိုဖြစ်နိင်ကြောင်း NDPD မှဦးသာအေးကအထောက်အထားများဖြင့်­ပြောကြား
myanamarmuslimnet uploadedavideo 14 hours ago
The Real Intruders form Bangladesh
This entry was posted on October 26, 2012, in ဗီဒီယို, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
A documentary video on the genocides against Rohingyas by Myanmar government ( Leaked Video)
“Although mass killings and exterminations of human races were some sort of things that the world experienced during Nazi German period, the similar or worse kinds of genocides and mass killings againstaworld’s most forgotten people are being systematically implemented by the government in Myanmar now and at this moment. Specifically, since 1942, one of the historic and most horrendous mass killings has been being carried out againstaMuslim Rohingya community,acommunity who have been living in the western part of Burma from the time of immemorial. The recent ethnic of cleansing of the mentioned community that was instigated in June 2012 is not stopped and over yet.
This documentary video on the genocides against Rohingyas is made by Myanmar government and leaked into the media through some government officials.”
By looking at the video therein,
The entire atrocities have been well orchestrated by the government of the Rakhine State acknowledged by the Burmese government and implemented by the Mob, Police and the Burmese Army Bridgette.
Based on the victim’s testimony from the other video sources states that The police and the army came to their house and force them to evacuate from their dwelling in order to save the victims from getting under fire Instead of preventing the mob not to set fire on the victims dwelling area.
By looking at the event, Mob set the fire on the victims houses. Police and Army fail to stop the MOB during the conflict and fail to safe lives and properties of the victims. Rakine states government fail to put the mob on trial and take any kind of legal actions towards persons involved. Rather than that , Rakhine party leadership and the Monks promote the violence.
Therefore, more than 70,000 people forced to flee their homes and put into the concentration champs in order to deport and push them into the SEA.
The evidence of that is the Burmese president Thein Sein’s speech to the people of Burma and the UNHCR chief. Is it notacrime against Humanity on forceful displacement of people?
Since they have put the Rohingya in the concentration champs. while Arakan states is under curfew, The army and police knowingly fail to stop the MOB from attacking the Rohinga victims as well as fail to bring the situation to normality. It is to suspect that, Why the army and the police forces fail to control the mob once they have been successfully control the similar mob in 2007 revolution and 1988 revolution and so on. Therefore, we see the Hippocratic and direct and indirect involvement of authority in this process of exodus to Rohingya.
The army, police and the State govern fail to provide and deliver the humanitarian aids to the victim on time as well as knowingly disturbing Local and International NGO’s from helping the victims in the Concentration Champs.Therefore, many children and elderly people have lost their lives due to malnutrition and diseases.
When Rakhine mob attacking and stopping NGO personal from helping the victims , Police, Army and State authorities fail to stop the mob by ignoring the incident.
There is NO law and Order fairly enforced in the region and the victims are living under plight of none or minimal survival conditions.
That is to analyze that They have successfully implemented the project of Muslim free Zone in Sittwe and Arakan State. They are planning to do the similar
exercise in the mainland Burma. The small incident in Yamethin and other small area within Burma are starting examples.
Government will blame the outside Internet sources and the Monks at the end, but they are responsible to stop the promoter Monks and the people who spread the hate to the violence NOW.
.at 1:48 look ataman inablue T-Shit holdingalong stick.
. Army is systematically grouping the victims of the violence pushed by the another army troops in the slams to displace them to out of town.
. At 2:53 Soldiers lining up and marching in the operational style.
. What we see is army is busy with displacement of Rohingya rather than stopping the mob in the town from burning the victims homes more.
. At 5:01 Soldering are squatting as they are in the operation. We can tell army know exactly what they are doing during. This can be said they are doing military operation .
. At 5:54 Children are going toasmall water pond to flush their face and drink form that pond due to the thirst.
. At 20:2 Please look at the Man inaPink Shirt withastick treating the victims as the kettle and cows
Thousands or people were displaced and forced to flee their home and business. This kind of systematic displacement is taken place by the brutality of the mob and the smile of the army officer in the name of saving the victims to the place where there is NO food, shades and shelter and no way of return to the place where they belong.
Where is the Justice ? What is the future of those people ? If it is not the crime against Humanity then what will we call that to ? What can we do to bring justice to the people that are voluntarily involve in this ?
This entry was posted on October 18, 2012, in ဗီဒီယို, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
မြန်မာမွတ်စလင်မ်အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဦးရာရှစ်ရဲ့ ရာပြည့်အခမ်းအနား
ဂျပန်ခေတ်တစ်လျောက် မိဘများနှင့်အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိနေသော ဦးရာရှစ်အား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အိန္ဒိယနိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဂျဝါဟလာလ်နေရူးထံမှ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်စေကာ တိုင်းပြည်တည်ထောင်ရေးအတွက် မရမကပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ပြီး လေဆိပ်သို့ပင် ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့စဉ်။
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ) ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရာရှစ် ရာပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပရေးအတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ က ရန်ကုန်မြို့မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုခင်မောင်စိုးမင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား သမဂ္ဂ၏ ပထမဆုံးအထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးချုပ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဦးရာရှစ်။တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ဒုတိယကျောင်သားသပိတ် ပေါပေါက်ရေးအတွက် အဓိကတာဝန်ယူဦးဆောင်ခဲ့သော (ထိုစဉ်က) ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျောင်းသားသပိတ်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သည်။၁၉၃၆ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းသော ဗမာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ၏ ပထမဆုံး ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်၏။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် သခင်နု နှင့် ကိုရာရှစ်တို့နှစ်ဦးအား
ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ အတူတကွတွေ့ရစဉ် (၁၉၃၆ ခုနှစ်)
From M.A. San To M.A. Rashid but No M.A. after our names This is one point of resemblance between us – but many others too which you know of course.We two have been together on the Uni E.C and perhaps will have to do so till our death.)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက My dear Bhai Shid (ချစ်ခင်လေးစားရပါသော ကျနော့်ရဲ့ နောင်တော်ကြီး Shid) ဟု ခေါ်လေ့ရှိ်သော ဦးရာရှစ်ထံ
၁၁.၃.၁၉၃၆ နေ့က အမှတ်တရရေးပေါ်ခဲ့သောစာ
This entry was posted on October 16, 2012, in ဓါတ်ပုံများ, ဗီဒီယို, အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း and tagged Bogyoke Aung San, Burmese Muslim, U M.A Rashid, U Nu.	Leaveacomment
ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲက ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ကောင်းမွန်စွာ နားလည်တဲ့သူတွေအဖို့ အကျိုးရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မုစ်လင်မ်တွေဟာ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကို ခြိမ်းခြောက်နေပါသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ၅၂%က မခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း နောက်ဆုံးမှာ ဖြေဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
This entry was posted on October 10, 2012, in ဗီဒီယို.	Leaveacomment
အစောင့်ဂိတ်ဟာ တဖြည်းဖြည်း နီးလာတယ်။ လမ်းဘေး တဖက်တချက်မှာ လက်နက်ကိုင် အစောင့်တွေ ရှိနေတယ်။ ကျနော်တို့ စီးလာတဲ့ သုံးဘီးလည်းမက ပစ်ကပ်ထရပ် ကားလည်းမကျတဲ့ တက္ကစီကားဟာ တအိအိ နဲ့ မောင်းဝင် လာတယ်။ ဒရိုင်ဘာဟာ အသက်ပြင်းပြင်း ရှုရှိုက်ပြီး တုန့်ဆိုင်း နေတယ်။ သူဟာ စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ထခုန်တော့မတတ် သိသိသာသာ ကြောက်နေ တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးမိနစ်လောက်က ကားခ မြိုးမြိုးမြက်မြက် ရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ သွားလိုရာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ ပြောခဲ့တာ လည်း ဒီလူငယ်ပါပဲ။ ကျနော်တို့မှာ တခြား ရွေးစရာမရှိမှန်း သူသိတယ်လေ။ တခြား ကားဒရိုင်ဘာ တယောက်က ကျနော်တို့ကို ရှုံ့မဲ့ ငြင်းဆန်ပြီး သူ့လည်ပင်း ကိုသူ ဓားနဲ့လှီးသလို လုပ်ပြတာကိုလည်း သူမြင်ပြီးသား မဟုတ်လား။ ကျနော်တို့သွား ချင်တဲ့ နေရာဟာ သိသိသာသာကြီးကို အန္တရာယ်များတဲ့သဘော ရှိနေတာကိုး။
နောက်ဆုံး အခြေအနေ။…..။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကူလ်ဆွမ်း ဘီဘီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းက သေဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။
“ဘင်္ဂလီ” ငြင်းလိုက်တဲ့ ပထမ ဒရိုင်ဘာက သူ့ခေါင်းကို တွင်တွင်ခါရင်း ပြောတယ်။ “ဘင်္ဂလီ၊ နိုး၊ နိုး၊ နိုး”
ဘင်္ဂါလီ။ လာပြန်ပြီ ဒီစကားလုံး။ တကမ္ဘာလုံးက ရိုဟင်ဂျာလို့ သိထားကြတဲ့ မူဆလင် လူနည်းစု မျိုးနွယ်တခုကို တွေ့ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ဟာ မြန်မာပြည်က ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် စစ်တွေကို လာခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ တွေ့ခဲ့သမျှ … ကဖီးဆိုင်က စားပွဲထိုး တွေကအစ၊ ဒေသခံ အန်ဂျီအိုဝန်ထမ်းတွေ အလယ်၊ ဗုဒ္ဂ္ဂ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ အဆုံး… လူတိုင်းက ဒီ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ အဓိပဿပါယ်မရှိဘူးလို့ ပြောနေကြပါတယ်။ “ဘင်္ဂါလီ” လို့ပဲ သူတို့က ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒီအပြောင်း အလဲဟာ မကြာမီက မှ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဖြစ်စဉ်တခု ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ ဘုန်းကြီး ကျောင်းတခုမှာ ကျနော်တို့ကို ဘာသာ ပြန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ရဟန်းငယ် တပါးဟာ သူ့ထက်ဝါကြီးတဲ့ ဘုန်းကြီးတပါးကို ကျနော်တို့ အင်တာဗျုး နေစဉ် အတောအတွင်းမှာ မကြာခဏ ယောင်ပြီး ရိုဟင်ဂျာလို့ သုံးနှုန်းနေခဲ့ပါတယ်။
“ရိုဟင်ဂျာ” လို့ သူက စလိုက်တာနဲ့..
“ဘင်္ဂါလီ” လို့ သူ့ကျောင်းထိုင်ကလည်း ထပ်ကာတလဲလဲ ပြင်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။
ဒီအပြုအမူဟာ လူမျိုးစုတခုအပေါ်မှာ ဘယ်လိုခေါ်ဝေါသလဲ ဆိုတာ လက်ပေါက် ကပ်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်မို့ နည်းနည်း အူကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်လို့ ထင်ကောင်း ထင်စရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ ဒီထက် ပိုကြီးမားတဲ့၊ ဆိုးရွားတဲ့ ပြဿနာကြီး တခုရဲ့ ရောဂါလက္ခာဏာတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒေသ ဟာ “ကမ္ဘာပေါ်မှာ အနှိပ်ကွပ်ခံရဆုံး လူနည်းစု”လို့ ကုလသမဂက ဖော်ပြခြင်း ခံရတဲ့ အရေအတွက် မသေးလှတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစု အတွက် အိမ်လို့ ခေါ်ဆိုစရာ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း မခံရဘဲ ဆယ်စုနှစ်များ နဲ့ချီပြီး တရားဝင်ခွဲခြား နှိပ်ကွပ်မှု့ကို ခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာ တွေဟာ အဆိုးရွားဆုံးသော ကပ်ဘေးကို ထပ်ကြုံနေကြရပါပြီ။အဲဒါကတော့ ရိုဟင်ဂျာ တွေကို တိုင်းပြည်ကနေ အပြီးတိုင် မောင်းထုတ်ဖို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေအကြား တနေ့တခြား ကြီးထွားလာနေတဲ့ တွန်းအား ကြီးပါပဲ။
ကျနော်တို့ဟာ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို လပေါင်း များစွာ ခပ်ခွာခွာက လေ့လာစောင့်ကြည့် ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဖတ်ရသလောက် ဒီဒေါသကို စတင် မီးမွှေးခဲ့တဲ့ အရာကတော့ မေလအတွင်းက မသီတာထွေး လို့ခေါ်တဲ့ ရခိုင်အမျိုးသမီးငယ်တဦး ကို ရက်ရက် စက်စက် မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့မှု့ပါ။ နောက်ကွယ်က တရားခံလို့ စွတ်စွဲခံရသူတွေ ကတော့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး သုံးဦးဖြစ်ပြီး သူတို့ကို အလျှင်အမြန် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဖမ်းဆီးမှု့ဟာ ဒီရေအလား မြင့်တက်လာတဲ့ ဒေါသလှိုင်းလုံးကို ငြိမ်သက် သွားစေဖို့ မလုံလောက် ခဲ့ပါဘူး။ ရက်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါ လူအုပ် ကြီးက ကားတစီးကို ဝိုင်းပြီး ပါလာတဲ့ မွတ်စလင်ကိုးယောက်ခန့်ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ ပါတယ်။အသတ်ခံရသူတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာ မဟုတ်သလို သူတို့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ် ကတောင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားဟာ သူတို့ကို တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် တရားထူထောင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက် ဖြစ်ခဲ့ဟန် တူပါတယ်။ဒေါသထွက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တွေဟာ ပြန်လည် လက်တုန့်ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
မောင်းတော်မြို့နယ်က ဆန္ဒပြပွဲတခုဟာ အင်မတန် အကျည်းတန်တဲ့ အဖြစ်ကို ဆိုက်သွားတယ်။ လက်စားချေမှု့ လှိုင်းလုံးတွေ ဆက်လိုက်လာခဲ့ တယ်။ အကြမ်းဖက်မှု့တွေ ပြန့်ပွားသွားခဲ့ပြီး သောင်းချီတဲ့လူတွေအတွက် အိပ်မက်ဆိုး ကြီးဟာ စတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အွန်လိုင်း ပေါ်မှာလည်း ရခိုင်ထောက်ခံသူတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေအကြား စကားလုံးစစ်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး စွတ်စွဲမှု့တွေနဲ့ အပြန်အလှန် ပစ်ပေါက်ကြပါတယ်။ အမုန်း ဆိပ်တွေ တက်နေကြချိန် တခါတရံမှာ အမှန်တရားကို စိစစ်ခွဲခြားယူဖို့ ခဲယဉ်း ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေ သလဲဆိုတာကို ရှာဖွေရန် အတွက် ကျနော်တို့ လာခဲ့ပါတယ်။ စစ်တွေကို ကျနော်တို့ ပထမဦးဆုံး ဆိုက်ရောက်လာတော့ အိပ်မော ကျနေတဲ့ မြို့ငယ်လေးတခုသဏ္ဍာန် မြင်တွေ့ရပါတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ စစ်ဖက် အရာရှိ အချို့ကို မြင်တွေ့ရပြီး ညမထွက်ရအမိန့်ကလည်း ရှိနေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ်က ဒီမြို့ကလေးကို လောင်တိုက်သွင်းခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှု့တွေရဲ့ အရိပ်အယောင်ကို မမြင်တွေ့ရတော့ သလောက်ပါပဲ။ လမ်းပေါ် မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေလည်း တယောက်တလေမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို သူတို့ရဲ့ ရုပ်ရည်ကနေ ကျနော်တို့ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရခိုင်တွေနဲ့ အမှတ်ထင်ထင် ကွဲပြား ပါတယ်။ အသားအရည် ပိုနက်မှောင်ပြီး သူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်လက္ခဏာတွေဟာ အိမ်နီးချင်း ဘဂင်ဿလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတွေနဲ့ ပိုဆင်ပါတယ်။ ဈေးဆိုင်တွေမှာလည်း ရိုဟင်ဂျာမတွေ့ရ၊ ဈေးထဲမှာလည်း မတွေ့ရ၊ အလုပ်သွားတာ၊ ကျောင်းသွားတာမှာလည်း ရိုဟင်ဂျာတွေကို မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ အရင်က ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ စစ်တွေမြို့ လူဦးရေရဲ့အနည်းဆုံး ထက်ဝက်မျှ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ ရိုဟင်ဂျာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်လုံး စစ်တွေမြို့ ကနေ ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။
“မွတ်စလင် လုံးဝမရှိတော့ဘူး” ကဖီးတခုထဲက စားပွဲထိုး တယောက်က ဝင်းလက်နေတဲ့ အပြုံးပန်းတွေ ဝေဝေဆာ ဆာနဲ့ ကျနော်တို့ကို ပြောတယ်။ “အခု လုံခြုံသွားပြီ။ ပြဿနာလုံးဝမရှိတော့ဘူး”
“မွတ်ဆလင်တွေဘယ်ရောက်သွားသလဲ” မေးတော့ သူက ရောက်တတ်ရာရာ လက်ကို ညွှန်ပြလိုက်ပြီး “သွားကုန်ကြပြီ”
အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်ဟာ စစ်တွေ တက္ကသိုလ်ပရဝုဏ်ဟောင်း အနီးမှာ တည်ရှိပါတယ်။ အဲဒီရပ်ကွက်ဟာ ဘာမှ ပြောစမှတ်မရှိလှပါဘူး။ အိမ်တွေ သိပ်ကောင်း ကောင်းမရှိ။ အများစုဟာ ဖျက်ဆီးခံ ထားရတဲ့ သစ်သားတိုင်တွေ၊ ထုတ်တန်းတွေ သာဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်တွေမြို့ လယ်ခေါင်မှာ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက် ဟာ အချက်တချက်ကြောင့် ထူးခြားနေတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ဒီရပ်ကွက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ရူးသွပ်မှု့အတွင်းမှာ လူအုပ်ကြီးတွေက ရွာပေါင်း များစွာကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့ လူထောင်ပြောင်း များစွာ စွန့်ခွာထွက်ပြေး ရတဲ့အချိန်မှာ ရှင်သန် ကျန်ရစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ တခုတည်းသော ရိုဟင်ဂျာနယ်မြေ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။
ကျနော်တို့သွားရောက်တဲ့ မနက်ခင်းက မိုးဖွဲဖွဲလေး ရွာသွန်းနေတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ ယူနီဖောင်းဝတ် ထားတဲ့ လက်နက်ကိုင် အချို့ဘေးက အမြန်ဖြတ် လာခဲ့ကြတယ်။ ကျနော်တို့ကို တားများတားလိုက် လေမလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူကမှ မတားဆီးခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံခြား သားတွေကို သူတို့ သိပ်အာရုံမစိုက်ပုံ မရဘူး။ အစောင့်တွေရဲ့တာဝန်ဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို အဲဒီနေရာကနေ အပြင်ကို မထွက်အောင် တားဆီးရမယ့် တာဝန်ပါ။
ကျနော်တို့ရဲ့ ဂျိတ် (အချိတ်အဆက်)ဟာ သူစောင့်မယ် ပြောထားတဲ့နေရာမှာ မတ်တတ်ရပ် စောင့်နေပါတယ်။ သူဝတ်လာ ခဲ့မယ်ပြောတဲ့ အဝတ်အစားအတိုင်း ဝတ်စား ထားပါတယ်။ ကျနော်တို့နဲ့ မျက်လုံးချင်း ခဏဆုံလိုက်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ သူဟာ အဆောက်အဦးတခု အတွင်းကို စွတ်ကနဲ ဝင်သွားပါတယ်။ ကျနော်တို့လည်း သုတ်ခြေ တင်ပြီး သူ့နောက်ကို လိုက်ကြပါတယ်။
ကျနော်တို့ အထဲရောက်တာနဲ့ W (ဒေသခံရဲ့ အမည်အတိုခေါက်)က ကျနော်တို့ လက်တွေ ကို ဖမ်းဆုပ် ကိုင်လိုက်ကြပါတယ်။ ဒီလို ချိန်းတွေ့နိုင်ဖို့ အတွက် ကျနော်တို့ ဖုန်းပေါ်မှာ နာရီများစွာ အချိန်ဖြုန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အသံနဲ့မျက်နှာ တွဲမြင် လိုက်ရတာ ဝမ်းသာစရာပါ။ သူဟာ အဂင်ဿလိပ်စကားကို ချောချောမွေ့မွေ့ သွက်သွက်လက်လက် ပြောဆိုနိုင်ပြီး ကျနော်တို့က အခြေအနေကို မေးမြန်း လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် သူ့ဆီက ကရားရေ လွှတ်သလို စကားတွေ ထွက်ကျလာ ပါတော့တယ်။
“ကျနော်တို့တွေ ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဗျာ။ ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာ ကျနော်တို့ ဘယ်လောက် ကြာကြာ ဒုက္ခခံစားခဲ့ရသလဲ။ ကျနော်တို့ ဆက်ပြီး သည်းမခံနိုင်တော့ဘူးဗျာ”
ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက သူ့ရဲ့လမ်းကို လာဝိုင်းတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေပါဝင်တဲ့ လူအုပ်ကြီး အကြောင်းကို သူက ကျနော်တို့ကို ပြောပြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်က မောင်းတောမှာ ကျေးရွာတရွာကို ရိုဟင်ဂျာတွေက ဖျက်ဆီး ခဲ့တဲ့အတွက် တုန့်ပြန် လက်စားချေဖို့ပါ။ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ကလေး ရှိရှိသမျှကို အိမ်ထဲကနေ ထွက်ဖို့ ပြောပါတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ လူတွေ ထောင်ပေါင်းများစွာ ပြည့်နှက်နေပြီး နောက်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ မရေရာဖြစ်နေပါတယ်။
“ကျနော့်ယောက်ဖ နှစ်ယောက် အသတ်ခံ ရတယ်”
Wရဲ့အသံဟာ ကွဲအက်နေတယ်။ သူ့မျက်လုံး တွေ စိုစွတ်နေတယ်။
“ကျနော်တို့ ဘယ်လိုဆက်ပြီး စိတ်ရှည်သီးခံ ရမလဲ၊ ဒါဟာ မှန်ရော မှန်ကန်ရဲ့လားဗျာ”
သူ့ယောက်ဖ နှစ်ယောက်စလုံး သူ့မျက်စိ အောက်မှာတင် ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက် သတ်ဖြတ် ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ရဲစခန်းဟာ အနီးအနား မှာတင်ရှိပါတယ်။ မိသားစုဝင်တွေဟာ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှု့ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သတင်းပို့ပီး အကူအညီ တောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဲတွေဟာ အားလုံးပြီး ဆုံးသွားတော့မှ ရောက်ရှိလာပြီး အဲဒီ အချိန်မှာ အရမ်း နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။
ရူးသွပ်မှု့ကြီး ပြီးဆုံးသွားတဲ့ အချိန်မှာ ထောင်ပေါင်း များစွာသော အိမ်တွေဟာ ဘုန်းဘုန်းကျသည် အထိ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ တိတ်တဆိတ် ခိုးထုတ် လာခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း တွေထဲမှာ ကြံရာမရ ဖြစ်နေတဲ့ ရွာသားတွေဟာ သူတို့အိမ်တွေကို ဝါးမျိုနေတဲ့ မီးလျှံကြီးများကို ငြှိမ်းသတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဗီဒီယိုတခုထဲမှာဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာတစုဟာ ရေကန်လို့ထင်ရတဲ့ ခါးလောက်နက် တဲ့ရေထဲမှာ မတ်တတ်ရပ်ပြီး ကြံမိကြံရာ ဆုတောင်းစာတွေကို အော်ဆိုနေကြတယ်။ နောက်ခံမှာတော့ သူတို့ရဲ့အိမ်ယာတွေကို မီးလျှံတွေက ဝါးမျိုလျက်။
ဘာကြောင့်လဲလို့ အသေအချာ မသိရပေမယ့် အောင်မဂင်ဿလာရပ်ကွက်ဟာ ဒီအကြမ်းဖက် မှု့တွေကြားက ရုန်းထွက် ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ အခြားသူတို့ရဲ့ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများ လိုမဟုတ်ဘဲ W ရဲ့ မိသားစုနဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေဟာ သူတို့ အိမ်တွေမှာပဲ ဆက်လက်နေထိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ သွားလာ လှုပ်ရှားမှု့ကိုတော့ အကြီးအကျယ် ကန့်သတ်ထားခြင်း ခံခဲ့ရ ပါတယ်။
“ကျမတို့ မြို့ထဲသွားရင် သူတို့က ဖမ်းမယ်” W ရဲ့သမီးဖြစ်သူ အက်စ် က ပြောပါတယ်။ “ပုံမှန်အားဖြင့် ကျမတို့ အိမ်ပြင်တောင် မထွက်ရဲပါဘူး”
သုံးလအကြာ ဘယ်မှမသွားရလို့ ထိန်းချုပ်ခံရ တဲ့အခါ စထိလာတယ်။ သိုလှောင်ထားတဲ့ အစားအစာတွေ နည်းပါးလာတယ်။ ဈေးကနေ ရနိုင်တဲ့ နိစ္စဓူဝ လိုအပ်ချက်တွေအတွက် သူတို့မိသားစုဟာ ရခိုင်လူမျိုး ကြားလူများ အပေါ်မှာ မှီခိုနေရပါတယ်။ ငွေကြေး အကြပ်အတည်း ကလည်း ကြီးထွားလာတယ်။ အရွယ် ရောက်သူဘယ်သူမှ အလုပ်သွားလို့မရ။ ကလေးများလည်း ကျောင်းတက်လို့ မရ။ နဂိုပုံမှန် အခြေအနေကို ပြန်ရောက် မရောက် ဆိုတာကိုလည်း ဘယ်သူမှမသိ။
W နဲ့ သူ့မိသားစုအတွက် အခြေအနေဟာ အုံ့မှုိ့င်းနေတယ်ဆိုရင် လုံးဝ ရွာလုံးကျွတ် ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီး ရွာပျောက်သွားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်တော့ အလွန့်အလွန် သာ၍ ဆိုးရွားလှပါတယ်။ တမနက်မှာ အရင်တုန်းက တံငါရွာကလေး တရွာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ နေရာတခုကို ကျနော်တို့ သွားကြည့်ကြပါတယ်။ ခွေးလေခွေးလွင့် တကောင်ဟာ မိုင်ပေါင်းများစွာ ရှည်လျားတဲ့ မီးကျွမ်းနေတဲ့ သစ်သားများ၊ အုတ်ကျိုး အုတ်ပဲ့များနဲ့ ဖွာလန်ကြဲနေတဲ့ အိမ်သုံး ပစဿစည်းများအကြားမှာ စားကြွင်းစားကျန်ကို လှန်လှောရှာဖွေနေပါတယ်။ နဂိုက အိမ်အဝင် တံခါး တခုလို့ ယူဆရတဲ့ အကြွင်းအကျန် နေရာတခုမှာ ပိုင်ရှင်မရှိတော့တဲ့ ကလေးစီး ဖိနပ်တခုဟာ လဲလျောင်းနေပါတယ်။
ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဟာ အစောင့်ဂိတ်ရဲ့ အလွန်မှာ ရှိတယ်။ စစ်တွေမှာ ခြေမချမိခင် အချိန်ကာလ ကြာရှည်သဖြင့်ကတည်းက စခန်းထဲမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ဖုန်းပေါ်မှာ စကားပြောခဲ့ရတဲ့ အလျောက် ဒီစခန်း တွေအကြောင်းကို ကြားသိခဲု့ပီး ဖြစ်တယ်။ အခြေအနေတွေဟာ ဆိုရွားတယ်၊ စားနပ် ရိက္ခာ၊ နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ ဆေးဝါးမလုံ လောက်၊ အဲဒီနေရာကို သွားရောက်ဖို့လည်း ခက်ခဲလှတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း။ ကျနော်တို့ မဖြစ်မနေ ကြိုးစားကြည့်ရမယ့် အကြောင်း။ မဖြစ်မနေ သွားကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း။ အမြန်ဆုံးလာသင့်တဲ့အကြောင်း။
ကျနော်တို့ တက္ကစီဟာ အတားအဆီးနားကို တလိမ့်ချင်း ဝင်လာနေတယ်။ အစောင့်တွေရဲ့ အလွန် တနေရာမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ အချိတ်အဆက်ဟာ စောင့်နေတယ်။ ဒရိုင်ဗာ ဟာ ကျနော်တို့ဖက် လှည့်ကြည့်တယ်။
“ပတ်စ်ပို့တ် (နိုင်ငံကူးလက်မှတ်)”လို့ ဒရိုင်ဘာက ပြောတယ်။ ကျနော်တို့ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အစောင့်တွေကို ပြသသင့်တယ် ဆိုတဲ့ သဘော။
ကျနော်တို့ တယောက်မှ တုပ်တုပ် မလှုပ်ကြဘူး။ ဒီအကြံဟာ မကောင်းဘူး ဆိုတာ ကျနော်တို့ ဗီဇစိတ်အလျောက် သိနေကြတယ်။
“ပတ်စ်ပို့တ်”လို့ ဒရိုင်ဘာက ထပ်ပြော ပြန်တယ်။
“မောင်း၊ မောင်း၊ မောင်း” ဂျိမ်းစ်က ခပ်တိုးတိုးပြောတယ်။
ဒရိုင်ဘာက (အရှိန်မြှင့်)လီဗာကို နင်းလိုက် တယ်။ တက္ကစီဟာ အစောင့်တွေကို ဖြတ်ကျော်သွားတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ ခေါင်းတွေကို ငုံ့ထားရင်း အသက်ကို အောင့်ထားကြတယ်။နေ့လည်စာ စားချိန်မို့ လား မသိ။ ဘယ်သူမှ ကျနော်တို့နောက်ကို လိုက်မလာခဲ့ဘူး။ အစောင့်ဂိတ်ကို ကျော်တဲ့အခါ အော်သံတသံကို ကြားရတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ အချိတ်အဆက်ဆီက။ သူက တကဿကစီနောက်က ပြေးလိုက်လာတယ်။ ပြေးလာရင်းက သူက ရယ်ဖြဲဖြဲနဲ့ “နောက်ဆုံးတော့ ခင်ဗျားတို့ ရောက်လာ ပြီပေါ့လေ” တဲ့။ ကျနော်တို့ ပြုံး လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ကြရင်း ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင် ကို စောင်းငဲ့ကြည့်ဖြစ်ကြတယ်။ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နေ့လည် ကြောင်တောင် လမ်းပေါ်မှာ မြင်ဖူးခြင်းပါပဲ။ ကျနော်တို့တက္ကစီဟာ အရောင်းအဝယ်တွေနဲ့ ယောက်ယက်ခတ်နေတဲ့ ဈေးတခု၊ ဆေးရုံ တဲတွေနဲ့ အတန်းလိုက် ဆောက်ထားတဲ့ ယာယီတဲတွေကြားက မြွေလိမ်မြွေကောက် ဖြတ်မောင်း လာခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ဟာ တက္ကစီကို ရပ်ခိုင်းပြီး ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ စိတ်စောနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဂျိတ်(အချိတ်အဆက်)က ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဒေသခံ ဘာသာရေးသင်တန်း ကျောင်းကို အရင်သွားသင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကျနော်တို့ ဝင်လာတာနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေက ကျနော်တို့ဘေးမှာ လာဝိုင်းကြပါတယ်။ အရမ်း များပြားလှတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေပါ။ တဖွဲဖွဲ လာနေကြတယ်။ ဘာသာရေး သင်တန်းကျောင်း စာသင်ခန်းတွေက၊ လှေကားအောက်က အိပ်ရာတွေက၊ အဖြစ် တည်ဆောက်ထားတဲ့ မီးဖိုချောင်တွေက၊ အဲဒီ ဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ ဗလီက နေ့လည်ခင်း ရှိခိုးနေကြသူများရော အသီးသီး ထွက်လာ ကြပါတယ်။ လူတွေဟာ ကျနော်တို့ ကင်မရာပတ်ပတ်လည်မှာ ဝိုင်းပြီး လူတိုင်းက တချိန်တည်း တပြိုင်တည်း သူတို့ရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြောပြဖို့ ကြိုးစားနေ ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုပါ။
မိန်းမတယောက်က သူ့သမီးကလေးရဲ့ ကျိုးနေတဲ့ လက်ကို မပြခင် သူ့နဖူးက ကွဲနေတဲ့ ဒဏ်ရာကို ပြပါတယ်။ လူအုပ်က လာပြီး တိုက်ခိုက်စဉ်က သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ပုန်းနေခဲ့ကြ ရပါတယ်။
“လုံခြုံရေးတွေကလည်း ကူပြီး တိုက်ခိုက် ကြတယ်”ကျနော်တို့ ဂျိတ်က ရှင်းပြပါတယ်။
ယောက်ျားတယောက်ကတော့ သူရှပ်အင်္ကျီကို လှန်ပြီး ဓားဒဏ်ရာကို ပြပါတယ်။ အခြား တယောက်တော့ သူ့အိမ်ကို ရခိုင်တစုက မီးရှို့နေစဉ်အတွင်း ရဲတွေဟာ ရပ်ကြည့်နေ တယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။ဒုက္ခသည်စခန်း နေရာအနှံ့မှာရှိတဲ့ ရွာပေါင်း များစွာက ဒုက္ခသည်တွေထံက ထပ်ကာတလဲလဲ ကြားခဲ့ရတဲ့အရာကတော့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ သို့မဟုတ် ရဲတွေဟာ အကြမ်းဖက်မှု့တွေမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အကြမ်း ဖက်မှု့ကို လက်ပိုက်ကြည့်နေခြင်းပါပဲ။ အစစ်ခံချက်တွေဟာ ကျောချမ်းလောက်ပါ တယ်။
ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ မျက်နှာပေါ်က ခိုကိုးရာ မဲု့ခင်းနဲ့ ခံပြင်းခြင်းတို့ကို မေ့ပျောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အစပိုင်းမှာတော့ တော်တော့် ကို ကြီးစိုးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ အဖြစ်အပျက်တွေဟာ တခုနဲ့တခု ရောထွေး သွားပြီး မှု့န်ဝါးသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ကျောင်းကို ရောက်လို့ ကူလ်ဆွမ်းဘီဘီ (ဒီဆောင်းပါး အပေါ်ဆုံးက ဓာတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့ မိန်းကလေး) နဲ့ သူ့မောင်လေးကို တွေ့ရတဲ့အခါ ဒီပြဿနာ ရဲ့လေးနက်မှု့ဟာ အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်ပါ တော့တယ်။
သူတို့မှာ မျက်လုံးနဲ့ နံရိုးပဲ ကျန်တော့တယ်။ မျက်လုံးတွေက ကြောက်လန့်မှု့တွေနဲ့ ပြည့်လျှမ်း နေတယ်။ သူတို့ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးဟာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု့အတွင်းမှာ သေဆုံးသွား ကြတယ်လို့ သူတို့ရဲ့အဒေါ်ဖြစ်သူ နူးရ်ဘာနု က ကျနော်တို့ကို ပြောပြပါတယ်။ သူမဟာ တူနဲ့တူမကို အကောင်းဆုံးစောင့်ရှောက်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နူးရ်ကိုယ်တိုင်မှာ လည်း ကလေးတွေ ရှိပြီး အစားအသောက် ခွဲတမ်းဟာလည်း အရမ်းကို နည်းပါး လှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမောက်ကမ နိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကတော့ ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာ စီးပွားရေးအ ကွက်မြင်သူတွေက စခန်း အတွင်းမှာပဲ ဈေးတခုကို ဖွင့်လှစ် ရောင်းချပါတယ်။ အသီးတွေ၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေ၊ အသားနဲ့ ကွမ်းယား ဆိုင်တောင် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ သွားလာမှု့ကို ကန့်သတ် ထားတဲ့အတွက် အနည်းအကျဉ်းကသာ အလုပ်ရှာဖွေလို့ရပါတယ်။ဖွင့်ထားတဲ့ဈေးကလည်း ပိုက်ဆံပေးဝယ်နိုင်တဲ့ သူတွေအတွက် သာဖြစ်နေပါတယ်။ငတ်မွတ်နေတဲ့ မိဘမဲ့များ ဟာ အခြားနေရာတွေကိုပဲ အားကိုး ရှာရ ပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တယောက်ဟာ ကလေးနဲ့အတူ ရှေ့ကို တိုးထွက်လာတယ်။ ကလေးကို မြင်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့အားလုံး အသက်ရှု ရပ်မတတ်ဖြစ်သွားတယ်။ ကလေး သေးသေးကလေးဟာ ဗိုက်ဟာ ပူဖောင်း ထွက်နေပြီး နံရိုးများက ထိုးထိုး ထောင်ထောင်၊ အသားအရေက အသားဝါ ရောဂါဖြစ်နေပုံ ပေါက်နေပါတယ်။ သူ့ကို ကယ်မယ့်သူမရှိရင်၊ ကူလ်ဆွမ်းနဲ့သူ့အစ်ကိုကို ကယ်မယ့်သူမရှိရင် မကြာခင် သူတို့သေရ တော့မယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ သိလိုက်ပါ တယ်။ ဒုက္ခသည်တွေက ဒီလိုကလေး ပေါင်းမြောက်များစွာ ရှိသေးကြောင်း ပြောပြကြတယ်။ ဆာလောင် မွတ်သိပ်မှု့ အပြင်၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ ငှက်ဖျားနဲ့ တခြားရောဂါပေါင်းစုံ ဒီနေရာမှာ အဖြစ်များ နေတယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။
ဒီကျောင်းမှာ ကြည့်ရှုစရာတွေ အမြောက် အမြား ကျန်သေးကြောင်း ကျနော် တို့ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ရဲ့ဂျိတ်က အချိန် သိပ်မကျန် တော့ကြောင်း သတိပေးပါတယ်။ ည ၇ နာရီ ညမထွက်ရ အမိန့်မတိုင်ခင် ဟိုတယ်လ်ကို ပြန်ရောက် ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားသွား ကြည့်စရာ နေရာများစွာလည်း ကျန်နေသေး ပါတယ်။
ကျနော်တို့ စခန်းကနေ ထွက်ခွာတဲ့အခါ လူအုပ်ကြီးက ကျနော်တို့နောက်ကနေ လိုက်ပါ လာပါတယ်။ ဂျိမ်းစ်က ငွေစက္ကူအချို့ကို လူငယ်တယောက် လက်ထဲ ထိုးထည့်ပေးပြီး ခလေးတွေအတွက်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကလေးတွေ ဟာ အစားအသောက် ကောင်းတနပ် သက်သက်ထက် ပိုပြီး လိုအပ်နေတယ် ဆိုတာကို ကျနော်တို့ သိနေပါတယ်။ သူတို့မှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု့ လိုအပ်နေတယ်၊ အိပ်ဖို့အတွက် သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့တဲ့နေရာ လိုအပ်နေတယ်၊ သောက်ရေ၊ ကိုယ်လက် သန့်ရှင်းရေးနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမှု့တွေ လိုအပ်နေတယ်။ တကယ်၍သာ မကြာခင် အချိန်အတောအတွင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲကြီးတခု ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင် သူတို့အားလုံးဟာ သူတို့လိုအပ် နေသမျှအရာ တခုတလေတောင် ရသွား ရဖို့ဆိုတာ မကျိန်းသေ တော့ပါတော့ဘူး ဆိုတာကိုလည်း ကျနော်တို့ သိနေခဲ့ပါတယ်။
( ဤ “သွားစရာ မြေမရှိ”ဆိုတဲ့ ရခိုင်ပြည်တွင်းက ပြဿနာကိုအခြေခံတဲ့ မှတ်တမ်းကို အယ်ဂျာဇီးရား အင်္ဂလိပ် အစီအစဉ် ၁၀၁ (အရှေ့ပိုင်း)မှာ စက်တင်ဘာ ၂၇ရက်နေ့မှာ ပြသဖို့ လျာထားခြင်း ခံရပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကြည့်ရှုရမယ့် လင့်ခ်ကို ရလျှင်ရခြင်း တင်ပေးပါမယ်။
ကျနော်တို့ဟာ ရခိုင် ဗုဒ္ဂ္ဂ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး များ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ အန်ဂျီအို စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနဲ့ ဒုက္ခသည်များကို နာရီပေါင်းများစွာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အကြောင်းကို အခြား ဆောင်းပါးတခုမှာ ရေးပြပါမယ်။)
Source: Khit Moung
This entry was posted on October 7, 2012, in ဗီဒီယို, အထူးကဏ္ဍ, နိုင်ငံရေး.	Leaveacomment
နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်နိုင်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
ဘင်္ဂလားဒေ့်ရှ် နိုင်ငံက ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေ (ဒါကတော့ အာရ်အဖ်အေက ရိုင်းစိုင်းစွာဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုအမည်ကို မသုံးစွဲပဲ စော်ကား ဖော်ပြထားတာပါ။) ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်စပ်ကတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံထဲကို တရားမဝင် ခိုးဝင်နေတဲ့ ကိစ္စနဲ့ အဲဒီခိုးဝင်လာတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှု နောက်ဆုံး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက် ပထမပိုင်းကို ထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ။ မောင်တောမြို့ အခြေစိုက် နယ်စပ်ဒေသ လူဝင်မှု စစ်ဆေးရေးနဲ့ ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ် (နစက) ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်နိုင်ဦးကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။
နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်နိုင်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း – အပိုင်း (၁)
နစက ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်နိုင်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း – အပိုင်း (၂)
This entry was posted on October 6, 2012, in ဗီဒီယို, အင်တာဗျူး.	Leaveacomment
ဒေါ်စုကို တောင်းပန်နိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ရူးချင်ယောင်ဆောင်သွားတဲ့ ဦးသိန်းစိန်
၅ အောင်တိုဘာလ ၂၀၁၂
အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့အတွက် အနှစ် (၂၀)နီးပါး နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံခဲ့ရသလို ထောင်နဲ့ချီတဲ့ (ဒီမိုကရေစီအရေး သက်စွန့်ကြိုးပမ်းထမ်းရွက်ခဲ့တဲ့ သူရဲ့ကောင်း)တွေလဲ အကျဉ်းကျခံခဲ့ရတယ်။ အရင်စစ်အစိုးရထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တောင်းပန်စကားပြောဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလားလို့မေးတဲ့မေးခွန်းကို ဦးသိန်းစိန်က စောက်တလွဲ အဖြေတွေနဲ့ ဖြေကြားရင်း ရူးချင်ယောင်ဆောင်သွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဦးသိန်းစိန်ရဲ့အသံဟာ ငိုသံကြီးတောင် ပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဘီဘီစီနဲ့အင်တာဗျူး ဗွီဒီယို အပြည့်အစုံကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
This entry was posted on October 5, 2012, in ဗီဒီယို, အင်တာဗျူး.	Leaveacomment
ရိုဟင်ဂျာများကို တတိယနိုင်ငံပို့မှာကို လုံးဝ ဆန့်ကျင်ကြောင်း ဒေါ်စုပြောကြား
Posted By: ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုအသံ
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနောက်ဖက်ခြမ်းက မြန်မာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ မှာ ရိုဟင်ဂျာများကို တတိယနိုင်ငံပို့မဲ့အစီအစဉ်ကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း အတိအလင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကို နှိမ်ချသောအားဖြင့် ကုလားဟုခေါ်ဆိုခြင်းကိုလည်း သူမအနေနဲ့ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ကြောင်းနဲ့ ဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြောကြားသွားပါတယ်။ အပြည့်အစုံ ဗီဒီယိုကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
This entry was posted on October 5, 2012, in ဗီဒီယို, အထူးကဏ္ဍ.	Leaveacomment
၀န်ကြီး ဦးခင်ရီနဲ့ ဗွီအိုအေ အင်တာဗျူး
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဒေသခံ ရခုိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ မူဆလင်တွေအကြား ပဋိပက္ခ၊ နိုင်ငံသားဥပဒေ စတာတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုခရီးစဉ်မှာ သမ္မတနဲ့အတူ လိုက်ပါလာတဲ့ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီကို ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ် ဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
Burma’s Immigration Minister, U Khin Yee talks to VOA Burmese Editor in Chief, U Than Lwin Htun about the Rakhine and Rohingya conflict in Rakhine State, citizenship laws in Burma and the future prospects for all people of the country.
အထက်ပါ အင်္ဂလိပ်နဲ့ မြန်မာစာပိုဒ်နှစ်ခုဟာ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းက ၎င်းတို့ဗွီဒီယိုကို ထုတ်လွှင့်တဲ့ ဘေးနဲ့အောက်ခြေမှာ ဖော်ပြထားတာပါ။ အဲဒီနေရာ စာရှုသူအနေနဲ့ သတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင် ဗွီအိုအေက မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ ရေးသားတဲ့အခါမှာ မူဆလင်လို့သုံးနှုန်းပြီး၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာတော့ ရိုဟင်ဂျာလို့ အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါဟာ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းရဲ့ မရိုးသားမှုတစ်ခုပါဘဲ။ လူ့အခွင့်အရေးထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာ ၎င်းတို့ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ ဗွီအိုအေမြန်မာအနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီးကနေ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာရှိကြောင်းနဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေ မည်သို့မည်ပုံ နှိပ်စက်မှု၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု၊ သတ်ဖြတ်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြုစုရေးသားထားတဲ့ရေးသားချက်တွေ၊ စာတမ်းတွေ၊ အစီအရင်ခံစာတွေ အခိုင်အမာရှိနေတဲ့အတွက် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုရဲ့အမည်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ ရေးသား၊ ပြောဆိုတိုင်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုရယ်လို့ မိမိတို့ဆန္ဒနဲ့ ဆန့်ကျင်နေသော်လည်း သုံးစွဲနေကြရပါတယ်။
အဲဒီတော့ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းကို အကြံပြုချင်တာကတော့ မြန်မာဘာသာစကားကနေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ဘာသာပြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကနေ မြန်မာဘာသာစကားကို ဘာသာပြန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လူမျိုးစုတစ်ခုရဲ့ နာမည်ကို တိုက်ရိုက်ဖလှယ်ယူပြီး သုံးနှုန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒါဟာ လူမျိုးစုတစ်စုရဲ့နာမည်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဥပမာဗျာ- ရခိုင်တွေဟာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့ကို ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ ရခိုင်လူမျိုးလို့ ဖော်ပြပြီး၊ ဘာကြောင့် ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်တွေလို့ မဖော်ပြရတာလဲ။ ဒါ့အပြင် အဲဒီ လူမျိုးစုနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ ဝေါဟာရတွေကို သုံးနှုန်းလို့လဲမရသလို၊ ယင်းသို့ သုံးနှုန်းခြင်းဟာ သက်ဆိုင်ရာ လူမျိုးစုကို ကျူးကျော်စော်ကားရာရောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မီဒီယာတွေအနေနဲ့ ရိုးသားမှုရှိစွာနဲ့ သူတစ်ပါး လူမျိုးရဲ့ အမည်ကို ဖော်ပြရေးသား၊ ပြောဆို၊ သုံးစွဲကြဖို့ အထူးအရေးကြီးပါကြောင်းနဲ့ ယင်းသို့ မပြုလုပ်ခြင်းဟာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကြောင်းကို သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
This entry was posted on October 5, 2012, in ဗီဒီယို, အင်တာဗျူး, အထူးကဏ္ဍ.	Leaveacomment
Rohingya: No Place In The World Part (1) | Documentary Video
goodmorningbeautifulisateam of four Australians seeking inspiration, justice and adventure through film and art. We do whatever it takes to find stories from the edges of the world and share them with the global audience.goodmorningbeautiful was founded in Cambodia in 2006, and now has offices in Asia, Africa and Australia.
NO PLACE IN THE WORLD PART (1)
This entry was posted on October 4, 2012, in ဗီဒီယို.	Leaveacomment
ဦးသိန်းစိန်နဲ့ မြန်မာမီဒီယာများရဲ့ အမေးအဖြေ
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် မြန်မာသတင်းသမားများတွေ့ဆုံ။ နယူးယောက်မြို့ မြန်မာမစ်ရှင်ရုံး။
This entry was posted on October 2, 2012, in ဗီဒီယို, အင်တာဗျူး.	Leaveacomment
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ရှိ Asia Society တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် စက်တင်ဘာ(၂၇)ရက် ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ(၅)နာရီ မိနစ်(၂၀)တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ရှိ Asia Society အသင်းရုံး၌ အဆိုပါအသင်းမှ အသင်းဝင်များအား တွေ့ဆုံအမှာစကား ပြောကြားသည်။
ရှေးဦးစွာ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် Asia Society အသင်းဝင်များအား ရင်းနှီး ခင်မင်စွာ နှုတ်ဆက်ပြီး အမှာစကား ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် အသင်းက မေးမြန်းသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ ဒီမိုကရေစီစနစ် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒနှင့် နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး အခြေအနေ၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးလာရန် စီမံဆောင်ရွက်နေမှု၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နေမှု အခြေအနေနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး၊ ဦးစိုးသိန်းနှင့် ဦးခင်ရီတို့က ပြန်လည် ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးကြသည်။
ပထမဦးဆုံး အနေနဲ့ ကျွန်တော် ပြောလိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရသစ်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတွေ အကောင်အထည် ဖေါ်နေချိန်မှာ၊ အစောပိုင်း လာလတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လာရောက် လေ့လာပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာ နိုင်ငံတကာကို ထောက်ခံ ပြောဆိုပေးခဲ့ကြတဲ့ Asia Society တာဝန်ရှိသူတွေကို ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
အဲဒီအစီအစဉ်ရဲ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း အပြည့်အစုံကို ပြန်လည် ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ မိန့်ခွန်းအပြင် အမေးနဲ့အဖြေကဏ္ဍလည်း ပါရှိပါတယ်။
This entry was posted on September 30, 2012, in ဗီဒီယို, အထူးကဏ္ဍ.	Leaveacomment
မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုကို ပိုမိုးတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီး၊ ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးပြုမဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားဖြစ်လာစေဖို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်အောင် ရည်ရွယ်ပြီး၊ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ ဒီဗွီဘီ၊ ပြန်ကြားရေးဌာနနဲ့ ဆွီဒင်ရေဒီယိုဌာနတို့ ပူးပေါင်းကာ A Forum on Public Service Broadcasting ပြည်သူ့အကျိုးပြုအသံလွှင့်လုပ်ငန်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
This entry was posted on September 29, 2012, in ဗီဒီယို.	Leaveacomment
ကမ္ဘာကျော် အလ်-ဂျာဇီးရားနိုင်ငံတကာရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းကနေပြီးတော့ ဗမာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုရဲ့အကြောင်းကို ရိုက်ကူးတင်ပြထားတာကို ပြန်လည် ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
၂၉ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၂
(စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် ၂ဝ၁၂)
La Waii Mon
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာရော အာဏာရအစိုးရတိုင်းက တိုင်းရင်းသားတွေကိုတန်းတူအခွင့်အရးရောပေးရဲ့လား? မည်မျှထူးချွန်ထက်မျက်တဲ့တိုင်းရင်းသားဖြစ်နေပါစေဗမာလူမျိုးမပာုတ်ရင်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်စစ်တပ်ပိုင်းအထဲမှာနေရာမပေးတာကရော? တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်ကထွက်တဲ့သယံဇာတတွေကိုပဲထုတ်ယူရောင်းစားပြီးတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေဆင်းရဲမွဲတေနေတာကိုဘယ်ဗမာလူမျိုးကမှ အစိုးရကိုထောက်ပြတာမျိုးမရှိပါဘူး။အခုမှလူမျိုးကြီးဝါဒကိုချစ်ပြနေလိုက်ကြတာ။ အင်လိပ်ကိုလိုနီလက်အောက်ရှိတုန်းကနယ်ချဲ့ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေကိုစည်းရုံးတာဒီလေသံတွေမပာုတ်ပါဘူး။
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါးလေ့လာကြည့်ပါအုံး။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏ဝိသေသခက္ခဏာများ Form of Federal Union
ပုဒ်မ (၁) ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသည်လွတ်လပ်၍အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်သည်။ယင်းကို ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
ပုဒ်မ (၂) ဖွဲ့စည်းခြင်း ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အပြည့်အဝရှိ၍ တန်းတူသောနိုင်ငံရေးအာဏာများကို ဤ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့်အညီ အပ်နှင်းခြင်းခံရသည့် ပြည်နယ်များဖြင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ဖွဲ့စည်းစေရမည်။
ပုဒ်မ (၃) အချုပ်အခြာအာဏာ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏ အချုပ်အခြာအာဏာတို့သည် နိုင်ငံသားတို့၏ လက်ဝယ်၌ တည်ရှိသည်။
ပုဒ်မ (၄) အချုပ်အခြာအာဏာကျင့်သုံးခြင်း ယင်းအချုပ်အခြာအာဏာကို ပုံမှန်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများမှ တဆင့် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် နိုင်ငံသားတို့က ရွေးချယ်ခန့်အပ်သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဤ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ခံယူကျင့်သုံးစေရမည်။
ပုဒ်မ (၅) အာဏာခွဲခြားမှု (က) အချုပ်အခြာအာဏာ၏ ပင်မမဏိုင်သုံးရပ်ဖြစ်သော ဥပဒေပြုအာဏာ၊ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာနှင့် တရားစီရင်ရေးအာဏာတို့ကို ခွဲခြားကျင့်သုံးစေရမည့်အပြင် အာဏာတစ်ရပ်နှင့်တစ်ရပ်အကြား အပြန်အလှန်ထိန်းညှိမှု ရှိစေရမည်။ (ခ) ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် လက်အောက်ခံ အခြား တရားရုံးအဆင့်ဆင့်တို့က ကျင့်သုံးစေရမည်။
ပုဒ်မ (၆) အာဏာခွဲဝေကျင့်သုံးခြင်း ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များအကြားတွင် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ အာဏာများကို ခွဲဝေကျင့်သုံးစေရမည်။
ပုဒ်မ (၇) ဘာသာရေးကိုအခြေမခံသောနိုင်ငံ (က) ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသည် နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေး ရောစပ်ခြင်းမရှိစေဘဲ၊ ဘာသာရေးကို အခြေမခံသောနိုင်ငံ ဖြစ်စေရမည်။ (ခ) မည်သည့်ဘာသာအယူဝါဒကိုမျှ နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် ပြဌာန်းခြင်းမရှိစေရ။
ပုဒ်မ (၈) နယ်နမိတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏ မြေထု၊ ရေထု၊ လေထုပါဝင်သော နယ်နမိတ်သည် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုပြဌာန်းသည့်နေ့တွင် တည်ရှိသည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များ အားလုံး၏ သဘောတူညီချက် မပါရှိဘဲ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏ နယ်နမိတ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုစေရ။
ပုဒ်မ (၉) နိုင်ငံရေးစနစ်
(က) ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၏နိုင်ငံရေးစနစ်သည် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် ဖြစ်သည်။
(ခ) နိုင်ငံရေးပါတီများကို ဒီမိုကရေစီ အခြေခံကျင့်စဉ်များနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းထူထောင်နိုင်သည်။
(ဂ) နိုင်ငံရေးပါတီများဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ပြဌာန်းပေးရမည်။
ပုဒ်မ (၁၀) အမြင့်ဆုံးဥပဒေ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတွင် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် အမြင့်ဆုံးဥပဒေ ဖြစ်သည်။လဝီမွန်
This entry was posted on September 29, 2012, in ဗီဒီယို, ဥပဒေ.	Leaveacomment
ဒီဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ကြစမ်းဗျာ။ ဘယ်လောက် သနားဖို့ကောင်းတဲ့ဆင်းရဲသားကျောမွဲတွေရဲ့ဘ၀လဲလို့။ ကျနော်ဆိုကြည့်ရင်းနဲ့ မျက်ရည်လည်မိပါတယ်။ မန္တလေးမှာ တရုတ်ပြီးကြီးပေါက်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စိရေးကတ်ကိုင်ထားတဲ့ တရုတ်တွေက တစ်ဝက်ကျော် ၀ါးမြိုထားပြီးတော့ တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်တွေကြတော့ နေစရာမရှိလို့ ငိုနေကြရတယ်။
This entry was posted on September 28, 2012, in ဗီဒီယို.	Leaveacomment
အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၊ ဖို့တ်ဝိန်းမြို့ မြန်မာ မိသားစုများနှင့် တွေ့ဆုံနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ စက်တင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂။
ကိုယ့်ရောက်ရာအရပ်မှာ အကောင်းဆုံး ပညာတွေကို ရှာယူပြီး တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ ခေတ္တရောက်နေ တဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အချိန်ပိုင်းအတွင်းကပဲ အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ဖို့ဝိန်းမြို့နဲ့ အနီးတ၀ိုက် ပြည်နယ်တွေ က မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ခုလို ပြောသွားတာပါ။ ဒီတွေ့ဆုံပွဲအကြောင်းကို မခင်ဖြူထွေးက တင်ပြထားပါတယ်။
ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် အကောင်းဆုံး ပြန်အကျိုးပြုချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာပဲ ရောက်နေရောက်နေ အဲဒီ နေရာဒေသကနေ အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ ပညာရပ်တွေကို ရှာဖွေ သင်ယူနိုင်အောင် ကြိုးစားရမယ်၊ ဒါမှသာ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်လည်း ပြန်ပြီး အကျိုးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်တယ် လို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖို့ဝိန်းမြို့မှာ မကြာသေးခင် အချိန်ပိုင်းကပဲ မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ပြောသွားခဲ့တာပါ။
ကိုယ်ရောက်နေတဲ့၊ ကိုယ်ကို ခိုလှုံခွင့်ပေးထားတဲ့ နိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ယူရတဲ့ သူတွေ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြဖို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ တခြား ပြည်နယ်တွေ က မြန်မာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတွေမှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ဒီကနေ့မှာ လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖို့ဝိန်းမြို့မှာရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ညီညွတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပင်လုံလို စိတ်ဓာတ် ရှင်သန်ဖို့ ဘာတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်မလဲလို့ တက်ရောက်လာသူတဦးရဲ့ အမေးကိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ခုလို ဖြေခဲ့ပါတယ်။
“ကျမတို့ တိုင်းရင်းသားများ အားလုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုနဲ့ လုပ်ရမယ့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကို ကျမ နည်းနည်း ရှင်းပြချင်တယ်။ ၂၁ ရာစု ပင်လုံလို့ ကျမတို့ ပြောတာဟာ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြောတာလဲ ဆိုတာ သိပ်ပြီးတော့ သဘောပေါက်ပုံမရဘူး။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်တခုကို ကျမတို့ မွေးမြူဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်ဆိုတာ အခြေခံအားဖြင့် ဘာလဲ ဆိုတော့ ကျမတို့ ကြားထဲမှာ မတူညီတဲ့ဟာတွေ ဘာပဲရှိရှိ ဒီ မတူညီမှုတွေ အပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ ညီညွတ်မှုရအောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ ပင်လုံစိတ်ဓာတ်လို့ ကျမ ပြောချင်ပါတယ်။”
ဒီနေ့ အခမ်းအနားမှာ ဖို့ဝိန်းမြို့ရဲ့ မြို့တော်ဝန် Tom Henry ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖို့ဝိန်းမြို့ကို ရောက်လာတဲ့ ဒီနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေ့အဖြစ် ကြေညာသွားပါတယ်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဆက်ပြီး ထောက်ခံသွားမယ် ဆိုတာနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖို့ဝိန်းမြို့က လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောဆိုပြီးတော့ လက်ရှိ ဖို့ဝိန်းမြို့တော်ဝန် တယောက် အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည် ဖို့ဝိန်းမြို့ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ ဒီနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်တဲ့ အကြောင်း၊ ဖို့ဝိန်းမြို့ခံ အားလုံးကလည်း သူနဲ့အတူ ၀ိုင်းဝန်း ဂုဏ်ပြုကြဖို့” – ဖို့ဝိန်းမြို့တော်ဝန် Tom Henry က ကြေညာသွားတာပါ။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်း မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက် အင်ဒီယားနားမှာရှိတဲ့ မြင်းမွေးတဲ့ ခြံတခုကိုလည်း သွားရောက်ဦးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီနေ့ အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ခရီးစဉ်ပြီးရင်တော့ မနက်ဖြန် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ နယူးယောက်မြို့ကျင်းပမယ့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံကို တက်ရောက်ပြီးတော့ ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတခုမှာ ပါဝင် ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် မြန်မာပြည်ကို မပြန်ခင်မှာတော့ အမေရိကန် အနောက်ဘက်ခြမ်း ပြည်နယ်တချို့ကိုလည်း ခရီးဆက်ပြီး အဲဒီမှာရှိတဲ့ မြန်မာ မိသားစုတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source: VOA and DVB
အဲဒီအစီအစဉ်ကို နားသောတဆင် ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ပြန်လည် ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
This entry was posted on September 26, 2012, in ဗီဒီယို, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
ဒေါ်စုနှင့် နယူးယောက်မြို့တော်နေ မြန်မာမိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲ
This entry was posted on September 26, 2012, in ဗီဒီယို.	Leaveacomment
ဒေါ်စုနှင့် ကင်တပ်ကီပြည်နယ် မိသားစုများ တွေ့ဆုံပွဲ
ဇာဂနာလွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းဟာ သူအာမခံခဲ့ခြင်းကြောင့်ဟု ၀န်ကြီးအောင်မင်း ပြောကြား
This entry was posted on September 20, 2012, in ဗီဒီယို.	Leaveacomment
ဒေါ်စုရဲ့ ဂုဏ်ပြုဆုလက်ခံရယူစဉ် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်း
လွှတ်တော်ရွှေတံဆိပ်ဆု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ခံရယူစဉ် တိုက်ရိုက်ပြောဆိုခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ထားပါသည်။
Aung San Suu Kyi and Hillary Clinton Address Asia Society in Washington D.C.
Myanmar democracy icon and parliamentarian Aung San Suu Kyi spoke Tuesday at an Asia Society event at the United States Institute of Peace in Washington, D.C., the initial public stop on her landmark first visit to the United States in more than 40 years. U.S. Secretary of State Hillary Clinton introduced the Nobel Laureate, who was released from house arrest in 2010. (Read the complete text of Secretary Clinton’s remarks as follows:
Clinton: US ‘Committed to Standing With’ Myanmar Government, People
U.S. Secretary of State Hillary R. Clinton makes introductory remarks before an address by Myanmar parliamentarian Aung San Suu Kyi at the U.S. Institute of Peace in Washington, D.C., on Sept. 18, 2012. (Asia Society/Joshua Roberts)
The following is complete text of U.S. Secretary of State Hillary Clinton’s opening remarks at Aung San Suu Kyi’s first visit to the United States in more than 40 years, an Asia Society event held at the United States Institute of Peace in Washington, D.C., on September 18, 2012.
Those flickers of progress that President Obama spoke of last —ayear ago, summer — have been growing and strengthening in the times since. Hundreds of prisoners of conscience have been released over the past year, including some just this week. Opposition political parties have been legalized and their members have won seats in parliament. Restrictions on the press, and on freedom of assembly, have eased. We’ve seen laws that have been enacted to expand the rights of workers to form labor unions, and to outlaw forced labor. And the government has reached fragile ceasefires in some long-running ethnic conflicts.
Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi warned on Tuesday that reforms in her country had cleared only the “first hurdle” and said she supported an easing of U.S. sanctions.
The Nobel laureate said American economic sanctions wereauseful tool for putting pressure on Myanmar’s military government, but now the people need to consolidate democracy on their own.
“I do support the easing of sanctions,” she said in remarks afteraspeech at the U.S. Institute of Peace in Washington on the opening day ofatwo-week tour of the United States.
Clinton told the same event Suu Kyi’s followers and the quasi-civilian government needed to work together to heal past wounds and “guard against backsliding because there are forces that would take the country in the wrong direction if given the chance.”
After opening remarks from Asia Society Co-Chair Henrietta Fore and United States Institute of Peace President Jim Marshall, Clinton and then Suu Kyi addressed the crowd individually. Suu Kyi was then awarded the Asia Society Global Vision Award by Asia Society Trustee Tom Freston. A question-and-answer session followed, moderated by Colette Rausch, Director of USIP’s Rule of Law Center, and Suzanne DiMaggio, Asia Society’s Vice President of Global Policy Programs.
ဒီအစီအစဉ် အစအဆုံး ရိုက်ကူးထား ရုပ်သံမှတ်တမ်းကို စာရှုသူပရိသတ်များ ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ရန် ပြန်လည် ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
This entry was posted on September 19, 2012, in ဓါတ်ပုံများ, ဗီဒီယို, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း.	Leaveacomment
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို ရောက်ရှိလာတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ အင်္ဂါနေ့က ၀ါရှင်တန် ဒီစီ မှာရှိတဲ့ ဗွီအိုအေ အမေရိကန်အသံ ရုံးချုပ်ကို ရောက်ရှိလာပြီး မြန်မာဌာနကလည်း သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းရဲ့ အကြီးတန်း အယ်ဒီတာ ဦးကျော်ဇံသာ က တွေ့ဆုံမေးမြန်း ထားတာပါ။
စာရှုသူများ နားသောတဆင်နိုင်ရန် ပြန်လည် ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
This entry was posted on September 19, 2012, in ဗီဒီယို, အင်တာဗျူး.	Leaveacomment
Genocide , Rohingya Muslim ,Arakan , Burma
Rohingya Muslim Genocide_1
Rohingya Muslim Refugee Camp
Demonstration in Egypt Against Rohingya Genocide in Arakan State, Burma
Rohingya Massacred by Myanmar In 2012
Rohingya Genocide plot in Arakan Myanmar
Rohingya – A hidden genocide is taking place in Burma…
This entry was posted on September 13, 2012, in ဗီဒီယို.	Leaveacomment
Professor Dr. Waqar’s Speech in United States
This entry was posted on September 11, 2012, in ဗီဒီယို.	Leaveacomment
အာရဗ်ကမ္ဘာကို လှုပ်ရှားသွားစေခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာ မုဟမ္မဒ် အာရိဖီရဲ့ ခွသ်ဗဟ်မိန့်ခွန်း
ရိုဟင်ဂျာမုစ်လင်မ်များအတွက် အာရဗ်ကမ္ဘာကို လှုပ်ရှားသွားစေခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာမုဟမ္မဒ် အာရိဖီရဲ့ ခွသ်ဗဟ်မိန့်ခွန်းအား အာရဗီဘာသာစကားနားလည်သူများ နားသောတဆင်နိုင်ရန် ပြန်လည် ရှယ်ပေးပါတယ်။